Andro Iraisampirenena Ho An’ny Angona Misokatra, Hatao Ny 22 Febroary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2014 5:29 GMT
Ho an'ny Andro Iraisampirenena Ho An'ny Angona Misokatra (Open Data Day) hatao ny 22 Febroary 2014, hifampiresaka mivantana ety anaty aterineto na ivelan'ny aterineto ihany koa ireo bilaogera, hakers, mpanome endrika, mpikirakira antontanisa ary olon-tsotra hafa liana amin'ny “Angona Misokatra” sy ny Mangarahara. Atao mba handrisihana ny hisian'ny fisokafana bebe kokoa amin'ny angon-drakitry ny governemanta ilay hetsika.
Ny tenifototra hiasa amin'ilay hetsika dia ny #ODD2014. Ny sasany amin'ireo mpampiasa Twitter dia efa nanomboka sahady nampakatra ny fanehoankeviny tamin'io tenifototra io.
#OpenData dia vondrom-piarahamonina iray ao anaty faritr'ora akaiky anao. http://t.co/ImmMztmcUM #ODD2014 hatao ny 22 Feb ho avy izao ka dia mariho ny tetiandronao !
Misy zavatra miainga ve ao #Cambodge ho an'ny #ODD2014 ?
Ooooeee ! Tongasoa eto amin'ny Open Data Day 2014 – #ODD14 #ODD2014 i @antoniocuga sy Però
Ampidiro ao anatin'ity lisitra ity ny tanànanao raha mbola tsy ao, ary manomboha manao fandaharanasa ho anà hetsika hatao ao an-toerana.
3 herinandro izayArabia Saodita